म्युजिक भिडियोमा राष्ट्रिय झण्डा ज’लाएको आ’रोपमा ग्याल्जोम दोर्जे तामाङसहित ९ जना प’क्राउ – Khabar PatrikaNp
म्युजिक भिडियोमा राष्ट्रिय झण्डा ज’लाएको आ’रोपमा ग्याल्जोम दोर्जे तामाङसहित ९ जना प’क्राउ
काठमाडौँ – म्युजिक भिडियोमा राष्ट्रिय झन्डा ज’लाएको आ’रोपमा प्रहरीले ९ जनालाई प’क्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय झण्डा ज’लाउने घटनाका मुख्य आ’रोपी ग्याल्जोम दोर्जे तामाङसहित हालसम्म ९ जना प’क्राउ परेका हुन् ।
जातीय हिं’सा भड्का’उन बल पुर्‍याउने र राष्ट्रिय झण्डा ज’लाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आ’लोचना भएको थियो । प्रहरीका अनुसार राष्ट्रिय झण्डा ज’लाउनेमध्ये ९ जनालाई प’क्राउ गरिएको र थप केहीको पहिचान भइसकेको छ ।
गत भदौ १ गते अपलोड गरिएको भिडियो अहिले पनि युट्युबमा उपलब्ध छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म भिडियोलाई झण्डै ६ लाखले हेरेका छन् भने २५ हजारभन्दा बढीले प्रतिक्रिया जनाएका छन् । प’क्राउ परेकालाई अपराध महाशाखा टेकुमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।
उक्त म्युजिक भिडियोको करीब ४० सेकेन्डदेखि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ज’लाएको दृश्य छ । भिडियो मकवानपुरको वागमती गाउँपालिका–३ स्थित सल्लेनीको विष्णु आधारभूत विद्यालयमा खिचिएको छ । म्युजिक भिडियोमा साम्प्रदायिकता माथि नै खलल पुग्ने किसिमका भनाइहरू भएका कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्को आ’लोचना भइरहेको छ ।
Prevअन्तिम दाहसंस्कार भइरहेको अवस्थामा कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि…
Nextआज \_मध्यराति देखि लागू भएको कर्फ्यू आदेश उलंघन गरे हुनेछ यस्तो कारबाही,
सबैका बुवा, मेरा बुवा जस्तै हुन…….
कालापानी प्रकरणमा नेपालले कडा जवाफ फर्काएपछि भारतीय अधिकारीले फेरे कुरा !
सोच्नै नसकिने घटना,आमाले आफ्ना छोराछोरीले विवाह गर्न लागेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (29409)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (27950)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (27743)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24455)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (21975)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (20803)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15535)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (14859)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13550)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13247)